Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara: Nandinika ny hamerenana ny hasin’ny Fitsarana
vendredi, 09 août 2019 13:11
Nihaona tamin’ireo mpikambana avy ao amin’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara (CSM), tao amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra, omaly 08 aogositra 2019, ny Filohan’ny Repoblika, sady filohan’ny CSM rahateo, Andry Rajoelina. Noresahana nandritra ity fivoriana ity ireo tena andraikitry ny mpitsara, ireo olana sedrain’izy ireo, ary ireo tolo-kevitra naroson’ireto mpitsara ireto, entina hanatsarana ny asan’izy ireo.
Marary ny fitsarana Malagasy raha ny fitarainan'ireo Malagasy maro tonga aty amiko mikasika ny fitsarana sy ny mpitsara, hoy i Andry Rajoelina ao amin’ny pejiny facebook. Handeha ny sivana hijerena sy ankasitrahana ireo mpitsara mendrika.
Nanome baiko ny filohan’ny Repoblika hanasaziana, hampiatoana ary hanenjehana ireo mpitsara mitanila. Tsy misy kiantranoantrano satria fitsarana mijoro, matanjaka, madio, mahitsy, mahaleo tena, ekena ary iankinan'ny vahoaka Malagasy ahafahantsika miady amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena. Asiana fanadihadiana ihany koa ireo fitoriana ataon’ny olon-tsotra tonga eo anivon’ny CSM.
Ankoatra izany dia ho jerena ny fomba mahomby hanafaingana ny fandehan’ireo raharaham-pitsarana sy hananganana fonja vaovao manerana ny Nosy.
Fanombohana ihany ity fifanakalozan-kevitra notanterahina omaly ity. Mbola hisy ireo andiany manaraka hahatratrarana ny tanjona, dia ny hisian’ny Fitsarana marina sy madio eto Madagasikara.